Xildhibaan Fiqi: Baarlamaanku ha baaro weerarkii hotel Saxafi – Kalfadhi
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa ugu baaqay Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare inay baaritaan ku sameeyaan weerarkii hotel Saxafi ee toddobaadkii hore. Xildhibaanka ayaa sheegay in hotelka ay degenaayeen mudaneyaal ka tirsan baarlamaanka federaalka ah. Saddex gaari oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa lagu weeraray hotelka jimcihii hore.
Xildhibaan Fiqi oo ah Agaasimehii hore ee Hay’adda Nabad Suggida iyo Amniga Qaranka (NISA) ayaa ku baaqay in baarlamaanka federaalka ah ay guddi madaxbanaan u saaraan baaritaanka weerarkaas iyo cidda ka dambeysay. Wuxuu ku baaqay in guddi isku-dhaf ah oo labada golle ah baaritaan ku sameeyaan sida kooxda weerarka fulisay ay ku heleen kabaha iyo dharka kale ee ciidamada dowladda ee tababarka ku jira. Waxa uu ku baaqay baaritaan aysan qeyb ka aheyn hay’adaha amniga oo ku tilmaamay inay ‘shaqadooda gabeen’.
Danjirihii hore ee dowladda Soomaaliyeed u fadhin jiray Suudaan waxa uu muujiyay tuhun uu ka qabo in weerarku ahaa mid siyaasadeysan oo lagu doonayay in lagu dilo xildhibaanada hoteelka degan. Fiqi iyo xildhibaanada kale ee hotelka degan ayaa loo arkaa inay mucaarad af adag ku yihiin xukuumada. “Waxaa runtii shaki na geliyey [waa] in wax baaritaan iyo dareen ah aysan ku dhalin dowladdeena iyo madaxdeena arrintaas [weerarka],” ayuu yiri xildhibaan Fiqi.
Wuxuu dowladda ku dhaliiyay inay ka gaabsatay tacsida iyo booqoshada dadka weerarka ku waxyeeloobay iyo xildhibaanada hoteelka la weeraray deganaa. Xildhibaan Axmed Cumar Fiqi waxa uu eedeymahaas ku sheegay shir jaraa’id oo uu warbaahinta ugu qabtay Muqdisho. Dowladda wax faahfaahin ah kama bixin baaritaan socda ama la qorsheeyay oo lagu sameynayo weerarkii hotel Saxafi ee Jimcihii hore.
Golaha Shacabka oo ansixiyay xeerka daawooyinka iyo howlwadeennada caafimaadka